Eyeshadow & Highlighter ၂မျိုးလုံးသုံးလို့ရမယ့် Rihanna ရဲ့ Fenty Beauty | CosmeticMyanmar
Home » Article » Eyeshadow & Highlighter ၂မျိုးလုံးသုံးလို့ရမယ့် Rihanna ရဲ့ Fenty Beauty
Rihanna ရဲ့ Fenty Beauty ထဲက လူကြိုက်အရမ်းများနေတဲ့ KILLAWATT Freestyle Highlighter လေးအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီ Palette လေးကတော့ Rihanna ရဲ့ ထွက်ရှိထားတဲ့ ပစ္စည်းအားလုံးထဲမှာ လူကြိုက်အရမ်းများပြီး Out of Stock ဖြစ်တဲ့အထိ ရောင်းအားကောင်းနေတဲ့ Product လည်းဖြစ်ပါတယ်။ လူကြိုက်အရမ်းများရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ face, eyes, lips, collarbone အကုန်လုံးကို မိမိကြိုက်သလို HIghlighter အဖြစ်အသုံးပြုလို့ ရတာကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Highlighter Pact လေးကတော့ TROPHY WIFE(3D HYPER-METALLIC GOLD), METAL MOON(MEGA-FINE WHITE GOLD PEARL), LIGHTNING DUST/FIRE CRYSTAL (SOFT PEARLESCENT SHEEN / SUPERCHARGED PEARLESCENT SHIMMER), MEAN MONEY/HU$TLA BABY(SOFT CHAMPAGNE SHEEN / SUPERCHARGED PEACHY CHAMPAGNE SHIMMER), GIRL NEXT DOOR/CHIC PHREAK(SOFT PINK SHEEN / SUPERCHARGED PEACHY PINK SHIMMER) & GINGER BINGE/MOSCOW MUL(SOFT COPPER SHEEN / SUPERCHARGED COPPER SHIMMER) ဆိုပြီး အရောင် ၆ရောင်ထွက်ရှိထားပါတယ်။ METALLIC GOLD နဲ့ WHITE GOLD PEARL ဆိုတဲ့အရောင် ၂မျိုးကတော့ အရောင် ၁ဘူးကို ၁ရောင်သာ ထုတ်လုပ်ထားပြီး ကျန်တဲ့ ၄မျိုးကတော့ Eyeshadow လိုမျိုး အသုံးပြုလို့ကောင်းတဲ့ အရောင်လေးတွေကို ၁ဘူးမှာ အရောင်အနုအရင့် ၂မျိုး ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ အသုံးပြုရတဲ့အခါမှာ ထိတွေ့မှုဟာလည်း အရေပြားပေါ်မှာ သီးသန့်ကြီးဖြစ်မနေဘဲ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေတာမို့ သုံးရတာအဆင်ပြေစေပါတယ်။ cream-powder ဆိုတဲ့အတွက် type ၂မျိုးကို ရောစပ်ထားအတွက်ကြောင့် သိပ်သိပ်လေးဖြစ်နေပြီး ဖွာထွက်ခြင်းမရှိ၊ ဘေးတွေကိုပြန့်ခြင်းမရှိစေဘဲ အလွန့်အလွန်ကို သုံးရတာ အဆင်ပြေစေတာကြောင့် Waste လည်းနည်းပါးသွားစေပါတယ်။ Pigmentation အရမ်းကောင်းတာကြောင့် killer radiance လိုတောင်တင်စားထားပါသေးတယ်။ Shimmary ပါဝင်တာကြောင့် ညဘက် Night Out ထွက်တဲ့အခါမျိုးမှာ သုံးလို့အကောင်းဆုံး Highlighter လေးဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဖုံးကွယ်နေတဲ့ အလှတရားတွေကို KILLAWATT Freestyle Highlighter နဲ့အတူ လင်းလက်တောက်ပမှုတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ကြရအောင်နော်!
WOW!!! လို့ဖြစ်သွားစေမယ့် Marina Mamic ရဲ့ makeup transformation ၁၀ မျိုး !